Posted by Tranquillus | Feb 4, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Maanta, adduunka xirfadleyda ah, xirfad muhiim ah oo inta badan la dayacay waa "ogaanshaha sida wax loo qoro". Tayo taas oo, da'da dijitaalka ah, badanaa la ilaaway.
Hase yeeshe, waqti kadib, waxaan ogaanay in xirfaddani ay isbeddel samayn karto mar uun. Tusaale ahaan, tixgeli isweydaarsigan HRD:
« Shaqaalaynta la qorsheeyey maanta, miyaad heshay musharrax ?
- Waxaan qaadnay tijaabooyin fara badan aakhirkiina waxaan helnay labo tartame oo leh isku asal, khibrado isku mid ah. Labadooduba waa la heli karaa si ay ugu bilaabaan booskan cusub.
- Maxaad sameyn doontaa si aad go'aan uga gaartid dhexdooda ?
- Maaha wax dhib badan ! Waxaan dooran doonaa labada midkood midka ugu fiican ku hadalka qoraalka. »
Haddii shaki jiro, mudnaanta waxaa la siiyaa kan sida ugu fiican wax u qora.
Tusaalaha kor ku xusan wuxuu si fiican u muujinayaa, sida qorista looga hor istaagi karo nidaamka qorista. Haddii aad ku wanaagsan tahay ama aad ku xun tahay warshad kasta, waayo-aragnimadu waxay muujisay in haysashada qoraal fiican ay qofka u horseedi karto inuu ka faa'iideysto fursadaha qaarkood. Tayada qoraalkiisa ayaa sidaas noqota xirfad gaar ah. Cunsur ku siin kara sharci ahaansho dheeraad ah macnaha guud ee shaqaalaynta tusaale ahaan. Shirkad shaqaalaysiin ayaa markhaati ka ah tan, iyadoo leh: Xirfadaha siman, shaqaalee kan ugu fiican qora ». Dabeecada qoraalka murashaxa ayaa inta badan muujisa daryeelka uu ku soo kordhin karo shaqadiisa; dabeecad aan ka tagin qorayaasha kuwa aan dan ka lahayn.
Aqoonta qorista: waa hanti lama huraan ah
Qoraalku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada, hadey qorto emayl, waraaqo, warbixin, ama xitaa foom. Waxay markaa sahleysaa abaabulka hawl maalmeedka. Intaa waxaa dheer, qorista ayaa ku soo noqnoqota nolosha xirfadeed. Gaar ahaan waraaqda elektaroonigga ah, taas oo noqonaysa geedi socod lagama maarmaan u ah ganacsi kasta. Tilmaamaha u dhexeeya kala sarraynta iyo wada-hawlgalayaasha ama is-weydaarsiga u dhexeeya macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Si fiican wax u qoristu waxay markaa noqotaa xirfad la doonayo, xitaa haddii ay si dhif ah uga muuqato nidaamyada tixraaca ganacsiga.
Qoraalku wuxuu culeys badan ku qabaa inbadan oo naga mid ah. Si raaxo-darradu u baaba'do, is weydii su'aalaha soo socda:
Xaqiiqdii miyaan haystaa aqoonta aasaasiga ah ee qorista Faransiiska?
Qoraalkeygu caadi ahaan ma saxbaa oo ma ku filan yahay saafi ahaan?
Miyaan wax ka beddelaa habka aan u qoro emaylkayga, warbixinnadayda iyo in ka badan?
Gabagabo intee ah ayaan ka qaadan karnaa tan?
Su'aalaha kor lagu soo sheegay waa kuwo sharci ah. Jawiga xirfad ahaanta, laba shay oo muhiim ah ayaa badiyaa laga filayaa qorista.
Waxaan leenahay, marka hore, foomka halkaas oo ay muhiim tahay in fiiro gaar ah loo yeesho qoraal, athigaada, laakiin sidoo kale inabaabulka fikradaha. Sidaa darteed, mid kasta oo ka mid ah qoraaladaadu waa inay tixgeliyaan saxnaanta iyo hufnaanta adigoon ilaawayn soo koobid.
Si loo dhammeeyo, waxyaabaha ku jira inaad u bandhigto asxaabtaada ama qorista gacanta sare. Waa inuu noqdaa mid khuseeya. Su’aal maaha in wax la qoro si wax loo qoro laakiin waa in la akhriyaa oo la fahmaa. Adiga oo kale, qofna waqti uma haysto inuu ku lumiyo.
Si fiican u qorista, xirfad muhiim ah! 5-Maarso, 2021Tranquillus
horeMiyaan xaq u leeyahay inaan diido inaan dib u bixiyo tigidhada anigoon haysan dukumentiyo taageeraya?
socdaXoojinta shaqada taleefanka: waa maxay halista dhabta ah ee loo shaqeeyaha?